Xeer ilaaliyaha dalka oo racfaan ka qaadanaya go’aan lagu laalay BBI | Star FM
Home Wararka Kenya Xeer ilaaliyaha dalka oo racfaan ka qaadanaya go’aan lagu laalay BBI
Xeer ilaaliyaha dalka oo racfaan ka qaadanaya go’aan lagu laalay BBI
Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mr. Paul Kihara Kariuki ayaa maxkamadda ku wargeliyay qorsho ku aaddan racfaan ay dowladda dhexe doonayso in ay ka qaadato go’aan dhawaan soo baxay.
Qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in uusan ku qancin go’aanka maxkamadda.
Mr. Kihara ayaa sheegay in racfaanka ay dowladdu qaadanayso uu yahay mid ku saleysan danta shacabka.
Waxaa uu xusay in aynan suurtagal ahayn in maxkamadda ay laasho qorsho laga ansaxiyay in badan oo ka mid ah ismaamullada dalka , baarlamaanka , aqalka sare sidoo kalena ugu yaraan 3 milyan oo Kenyaan ah ay saxiixyadooda ku taageereen.
Waxay tani ku soo aadaysa iyada oo qaar ka mid ah shacabka ismaamulka Kajiado ay Mr. Kihara ka dalbadeen inuu is casilo maadaama uusan ku guulaysan inuu madaxweynaha siiyo talada habboon ee dhanka sharciga.
13-kii bishan ayay ahayd markii guddi ka kooban 5 garsoorayaal ka howlgalo maxkamadda sare ee dalka uu waxba kama jiraan ka soo qaaday geeddisocodka sharci beddelka ee BBI.
Previous articleShiinaha oo baaq u diray golaha amniga ee qaramada midoobay
Next articleDHAGEYSO:Banaanbax lagu dalbanayo in la soo celiyo dhalinyaro Eriteriya tababar loogu diray oo Muqdisho ka dhacay